"Ukubaluleka" ephakathi air-conditioning izesekeli
Wonke umuntu akamusha emaphakathi air conditioning, kanye ukhona emaphakathi air conditioning izesekeli azizwa "ozikhethela", ake sibheke amandla abo kumagazini owodwa! Sonke siyazi ukuthi emaphakathi emoyeni isimo ukusebenza nge ukugxisha refrigerants ku iziphuzo ezimanzi ngokusebenzisa compressors bese co ...
Mayelana i-copper (isici metal)
Ithusi liyisici zesikhashana, uphawu chemical zethusi Cu, isiNgisi, idijithi kanambambili 29. zethusi Pure kuyinto metal ezithambile. Lapho Kwamanzi usike, ukuthi libomvu-orange nge ucwebezela ngendlela ekhangayo metallic. ductility High, conductivity ezishisayo kanye conductivity kagesi uyenze impahla ngokuvamile ezisetshenziswa e izintambo ...
Air conditioning izesekeli ephelele
Okokuqala, it siqukethe 6 izinhlelo: uhlelo imbobo, ifriji uhlelo, uhlelo humidifying, kagesi bafudumale system, amandla distribution system kanye Uhlelo lokuvikela nokulawula. Air imbobo uhlelo: uhlelo emoyeni imbobo we ekhethekile Ekupholiseni egumbini umshini ngokuvamile yakhiwa motor, fa ...
Isimiso Ukusebenza ifriji izingxenye
Isimiso zokusebenza ifriji ukuthi compressor licindezele umusi ne umfutho ku umusi ne ingcindezi ephakeme, ukuze sinciphise ivolumu umusi kwandise ingcindezi yokufuna. Samandla ukuncela kusukela evaporator ukusebenza naphakathi ingcindezi ongaphakeme umusi, ngemva ingcindezi ku ...